Gân bò nấu gì ngon? Tổng hợp 25 món ngon từ gân bò mềm thơm, dễ làm | Muasalebang - Muasalebang
Gân bò nấu gì ngon? Tổng hợp 25 món ngon từ gân bò mềm thơm, dễ làm | Muasalebang
Đang Đọc: Gân bò nấu gì ngon? Tổng hợp 25 món ngon từ gân bò mềm thơm, dễ làm | Muasalebang in Muasalebang
1 kuqala Iselele le-tendon yenkomo
2 2 I-tendon yenkomo ekhethiwe
2.1 I-tendon yenkomo efakwe okubabayo
2.2 Ithenda yenkomo ku-fish sauce
2.3 I-tendon yenkomo ekhethiwe
2.4 I-tendon yenkomo ekhethiwe ene-lemongrass ne-chili
3 3 I-tendon yenkomo ethosiwe
3.1 I-tendon yenkomo ethosiwe ene-lemongrass ne-chili
3.2 I-tendon yenkomo ethosiwe enoshukela nemuncu
4 4 Ibhodwe elishisayo le-tendon yenkomo
4.1 Ibhodwe elishisayo lethambo lenkomo elinomuthi wamaShayina
4.2 I-bamboo shoot hotpot yenyama yenkomo eshisayo
5 5 Ithenda yenkomo nge-wine sauce
6 6 I-tendon yenkomo eqoshiwe
6.1 I-tendon yenkomo isitshulu ngamazambane kanye nezaqathi
6.2 I-tendon yenkomo eqoshiwe ene-lotus
6.3 Ithenda yenkomo eyisitshulu enobhontshisi obomvu
6.4 I-tendon yenkomo ephekwe nge-curry
6.5 I-tendon yenkomo yezinongo ezinhlanu
6.6 I-tendon yenkomo eqoshiwe ene-satay
6.7 I-tendon yenkomo eyisitshulu enethanga lenkukhu yamakhowe
6.8 I-tendon yenkomo ephekwe ngama-pickle
6.9 I-tendon yenkomo ephekwe nge-papaya
7 7 Ithenda yenkomo eshisiwe enogalikhi
8 8 Isobho le-tendon yenkomo
9 9 Isobho le-tendon yenkomo nama-pickle
10 eziyishumi I-braised yenkomo yenkomo
10.1 Ithenda yenkomo eboshiwe enotshani benkomo kanye nopelepele
10.2 Umsipha wenkomo we-braised namaqanda ezigwaca
11 11 Iphalishi le-tendon yenkomo
kuqala Iselele le-tendon yenkomo
Ezinsukwini zakho zamahhala, ngokushesha yenza i-tendon yenkomo nge-toadstool enokunambitheka okuqinile, okuqinile kwamathoni, okuhlanganisa ukunambitheka okumuncu kwamaxoxo amancane, ukunambitheka okubabayo nokumnandi kwesosi yenhlanzi, ushukela, u-garlic, ne-chili, okugqugquzela ukunambitha kakhulu.
Akukhona nje ukuthi kulula ukwenza, i-tendon yenkomo nayo imnandi kakhulu, isidlo esihle ongaphatha umndeni wakho, izihlobo nabangane.
2 I-tendon yenkomo ekhethiwe
I-tendon yenkomo efakwe okubabayo
Izinongo ezanele ezifana ne-kumquat, i-lemongrass, i-ginger, i-chili, … yenza ukunambitheka okumnandi, okuyingqayizivele okungenakudideka. Ucezu ngalunye lomthambo wenyama yenkomo luthambile, lumuncwa ngokulinganayo ngezinongo ezikhangayo nezimuncu.
Ucezu ngalunye lwethenda lubukhali, lucwiliswe kahle embizeni yengilazi bese lufakwa epuletini, luqhamuke ngobhiya obubandayo obuncane, kuhle!
Ithenda yenkomo ku-fish sauce
Uma kufanele ukhethe isiphuzo ozokwabelana ngaso nabangani emaphathini ngezimpelasonto, ithenda yenkomo enesoso yezinhlanzi izoba yisinqumo esihle sokujabulela nokuphatha.
Ukunambitheka kwethenda yenkomo ku-crispy, kuyahlafuna, futhi amunca ngokulinganayo ngezinongo ezinesibindi ezinjengomuncu, usawoti, umnandi, nezinongo. Vele ungeze imifino embalwa eluhlaza kanye nobhiya obandayo futhi kumnandi!
I-tendon yenkomo ekhethiwe
Ithenda yenkomo eqediwe izoba nokunambitheka okumnandi nokumuncu. Ngaphezu kwalokho, lapho uhlafuna, uzwa futhi ukunambitheka kwe-crunchy crunchy okumangalisayo kakhulu.
Lesi sidlo ongasisebenzisa njenge-snack noma njenge-snack enobhiya obandayo muhle kakhulu. Indlela ilula, noma ubani angayenza, izame ngokushesha nje lapho uthola ithuba!
I-tendon yenkomo ekhethiwe ene-lemongrass ne-chili
I-tendon yenkomo ngemva kokucwiliswa i-lemongrass kanye ne-chili izoba nephunga elimnandi le-lemongrass. Uma uyidla, uzozwa umthambo wenkomo wenkomo ocwebezelayo, obabayo, obabayo onephunga elingachazeki lemongrass.
Xem Thêm Cách nhận biết tinh bột nghệ nguyên chất và phân biệt với tinh bột nghệ giả | Muasalebang
Lokhu kuthembisa ukuthi kuzoba isidlo esiphundu sephathi ngezimpelasonto nabangani, ngokuqinisekile bazothanda ukunambitheka okumnandi nokucebile kwalesi sidlo esimnandi!
3 I-tendon yenkomo ethosiwe
I-tendon yenkomo ethosiwe ene-lemongrass ne-chili
Ucezu ngalunye lomthambo wenkomo lucwebile futhi luyashisa, lukhanga ngokwedlulele. Umsipha wenyama yenkomo uyanyakaziswa-othoswe ngokulinganayo, ufakwe izinongo kanye nephunga elimnandi nelikhangayo lika-anyanisi, i-lemongrass, nesweli, okwenza isidlo sikhange kakhulu.
Ngalesi sidlo, ungasisebenzisa njengokudla etafuleni lokuphuza futhi ungadla nelayisi, kokubili okumnandi nokunomsoco.
I-tendon yenkomo ethosiwe enoshukela nemuncu
I-tendon yenkomo emnandi nemuncu yethulwa epuletini enemibala emihle emisha ehlanganisa okuluhlaza okwesibhakabhaka, obomvu, owolintshi, omhlophe ovela kuzithako ezintsha nezekhwalithi.
Umsipha wenyama yenkomo uthambile ngokwanele, kanye nemifino emisha eluhlaza, emuncwa isinongo esimnandi nesimuncu, esidonsa amehlo futhi sivuse imiqumbe yokunambitha kakhulu. Ake siye ekhishini ukuze senze lesi sidlo esimnandi uma unethuba!
4 Ibhodwe elishisayo le-tendon yenkomo
Ibhodwe elishisayo lethambo lenkomo elinomuthi wamaShayina
I-hotpot ye-tendon yenkomo enomuthi wendabuko waseShayina iyisitsha sebhodwe elishisayo esimnandi futhi esinomsoco, esiletha iphunga elimnandi lomuthi wendabuko wamaShayina. Umhluzi we-hotpot emnandi uphekwe isikhathi eside emathanjeni. Ithenda yenyama yenkomo isitshululwe ngokucophelela ngamakhambi aseShayina, ngakho-ke uma uyidla, uzozizwa uthambile kakhulu futhi uhlafuna, ojwayelekile wamathenda enyama yenkomo futhi unephunga elimnandi lomuthi wendabuko.
Ukuze ujabulele isidlo ngokugcwele, kufanele usidle ngama-noodle amaqanda nemifino eluhlaza. Ikakhulukazi uma ujabulela usuku lwemvula, kuyoba kuhle nakakhulu!
I-bamboo shoot hotpot yenyama yenkomo eshisayo
I-tendon yenkomo ebabayo enamahlumela e-bamboo enomhluzi ocebile omuncu futhi obabayo ifaneleka kakhulu ezinsukwini zemvula noma lapho isimo sezulu sibanda.
Faka ingxenye ye-vermicelli esanda kudliwa endishini, eminye imifino, amakhowe aphakanyiswe phezulu, uthele umhluzi futhi ujabulele ukunambitheka okumnandi nokumnandi kwezithako, umthambo wenkomo ocwebezelayo, ukucwiliswa nesoso yokudipha kuyinto enhle.
5 Ithenda yenkomo nge-wine sauce
Njengenhlanganisela evumelanayo yaseMpumalanga naseNtshonalanga, ithoni yenkomo enesosi yewayini inokubili iphunga le-anise ne-cardamom kodwa futhi inokunambitheka okukhanyayo, okumnandi kwewayini elikhanga kakhulu.
I-stewed kahle izaqathe, amazambane, u-anyanisi, … i-tendon yenkomo inokunambitheka okuthambile okulinganiselwe, igcina u-crispiness yayo, umhluzi ocebile, owenziwe nge-vermicelli noma isinkwa kufanelekile kakhulu futhi kuhle kakhulu.
6 I-tendon yenkomo eqoshiwe
I-tendon yenkomo isitshulu ngamazambane kanye nezaqathi
Ithenda yenkomo eyisitshulu ngamazambane kanye nezaqathi iyisidlo esimnandi esikufanele kakhulu ukuthi ushintshe ukunambitheka komndeni wakho ngalezo zinsuku lapho amalungu ekhathele kakhulu izitsha ezithosiwe nezinamafutha.
Isidlo simnandi futhi sigcwele izakhamzimba ezivela kumhluzi ocebile, omnandi, imisipha yenkomo yenkomo ethambile futhi emnandi kuhlanganiswe nobhatata nezaqathi. Ungakwazi ukuphakela ngelayisi elimhlophe noma isinkwa futhi kuhle.
I-tendon yenkomo eqoshiwe ene-lotus
Ithenda yenkomo ecatshangelwayo ingaba “yisiheyo” esimnandi kuphela etafuleni lokuphuza, manje usungakwazi ukutshuza umthambo wenkomo ngembewu yelotus emnandi futhi enomsoco ukondla umndeni wonke!
Ithenda yenyama yenkomo ithambile futhi ithambile, isobho limnandi ngenxa yejujube, imbewu yelotus namajikijolo e-goji ukukusiza nobabili ukuthi nidle kahle futhi nondliwe ngemisoco enenzuzo yomzimba.
Ithenda yenkomo eyisitshulu enobhontshisi obomvu
Ithenda yenkomo eyisitshulu enobhontshisi obomvu iyisitsha esimnandi futhi esinomsoco esinokunambitheka okumnandi, okukhangayo okumnandi.
Ithenda yenkomo iphekwe ngokushisa okuphakathi ukuze ikwazi ukugcina ukuthamba kwayo okungokwemvelo, ubhontshisi obomvu unamafutha, futhi umhluzi umnandi futhi unephunga elimnandi. Konke kuhlanganiswe ngokuvumelana kakhulu ukuze kwakhiwe ukunambitheka okungasoze kwalibaleka ukuze abantu bakujabulele!
I-tendon yenkomo ephekwe nge-curry
Kunzima ukumelana ne-curry yenkomo yenkomo enikezwa endishini enhle enombala wesafroni. Ukuthungwa okuqinile kocezu ngalunye lomthambo wenkomo kufakwe ukunambitheka kwekhari okumnandi.
Iphunga lika-anyanisi othosiwe, i-lemongrass kanye nesweli liyakhanga, kungakhathaliseki ukuthi lidliwa nelayisi elimhlophe noma isinkwa esishisayo, liyathandeka kakhulu, okwenza ukudla komndeni kube mnandi futhi kucebile.
I-tendon yenkomo yezinongo ezinhlanu
Ithenda yenkomo eyisitshulu esinama-flavour amahlanu igcwaliswa ngephunga elimnandi, izici ezikhanga kakhulu zezinambitheka ezinhlanu. Umbala wesitsha ubuye uvelele ngemisipha yenkomo efakwe ngokulinganayo ku-flavour emihlanu efakwe izaqathe eziwolintshi ezikhanyayo. U-anyanisi omncane oluhlaza uyanqunywa ukuhlobisa, okwenza isitsha se-tendon yenkomo eyisitshulu sikhange kakhulu.
Uma udla, uzozwa ukuthi umsipha wenkomo uthambile futhi uhlafuna ngokwanele futhi ugcwele izinongo ezinothile. Izaqathe zimnandi, umhluzi ufakwe ukunambitha futhi uyindilinga.
I-tendon yenkomo eqoshiwe ene-satay
Uma ungumuntu othanda ukudla okubabayo, ungazama lo mthambo wenyama yenkomo odonsa amehlo futhi unomsoco nge-satay!
Isitsha esinomsipha wenyama yenkomo siphekwe sathambile kodwa sisaqhubeka nokuqina, sixutshwe nezaqathi ezinoshukela, sifakwe izinongo ukuze sinambitheke, sibaba kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ungadla lesi sidlo nge-coriander, i-cilantro noma amahlumela kabhontshisi, lokhu kuzosiza ukunambitheka kwesitsha kukhule kukhangayo.
I-tendon yenkomo eyisitshulu enethanga lenkukhu yamakhowe
Ukunambitheka okumnandi, okucwebezelayo kanye nesiponji samakhowe ethanga enkukhu ayisitshulu kuhlanganiswe nemisipha yenyama yenkomo eqinile kuzoletha isitshulu esimnandi nesinomsoco nakho okuxakile kakhulu ukuzama kanye futhi uzizwe!
I-tendon yenkomo isitshulu amahora amaningi, ngakho-ke isinongo simuncwa ngokulinganayo, kanye namakhowe ethanga enkukhu amnandi namanzi, kanye nomhluzi onomsoco. Uma kudliwa nama-noodle ama-shrimp futhi kucwiliswe ngenkomishi ye-chili sauce, kumnandi!
I-tendon yenkomo ephekwe ngama-pickle
Ukunambitheka okumnandi nokumuncu kwama-pickle uma kugaywe ngamathenda enyama yenkomo kudala isidlo esisha esimnandi esinemibala eminingi ekhangayo ekufanelekela kakhulu ukuthi ushintshe ukunambitheka komndeni wonke ngemuva kosuku lokusebenza kanzima.
Ithenda yenkomo efakwe ukhukhamba iyinhlanganisela evumelanayo yokunambitheka okumnandi nokumuncu kanye nesinongo esanele. I-tendon yenkomo isitshulu ithambile futhi i-crispy, umhluzi omnandi nomuncu ubamba ukunambitheka. Okuhle kakhulu uma uyidla ishisa nge-vermicelli noma irayisi elimhlophe elishisiwe.
I-tendon yenkomo ephekwe nge-papaya
Ukuhambisana nesimo sezulu esishisayo, ukujabulela isitsha esipholile se-tendon yenkomo nge-papaya kuyoba yisinqumo esihle sokuthi uphathe wonke umndeni. Lesi sidlo kulula ukusipheka futhi sinomsoco ekudleni komndeni.
Imisipha yenkomo yenkomo enethenda, enamafutha kanye ne-sweet is stewed nge-papaya emnandi ehlanganiswe nesinongo ukunambitha, okwenza isidlo sikhange nakakhulu. Uma uthanda, ungadla ngerayisi elishubile kanye ne-vermicelli entsha.
7 Ithenda yenkomo eshisiwe enogalikhi
Asikho isidingo sokuchitha isikhathi esiningi, i-tendon yenkomo kagalikhi emnandi, ekhangayo evela ezithakweni ezitholakala kalula izokulethela ukudla okukhanga kakhulu!
I-tendon yenkomo ilungiswe ngokucophelela, igoqwe-othosiwe nge-garlic enephunga elimnandi necebile, ifaneleka kakhulu ukuthi uphuze ngalezo mpelasonto eziphumulele.
8 Isobho le-tendon yenkomo
Umhluzi umnandi, uyashisa futhi ucebile unephunga eliqinile, lemongrass ebabayo kancane likachili. I-crispy, i-crispy yenkomo yenkomo iyathandeka kakhulu. Ukwengeza ukunambitheka esitsheni, ungadla nelayisi elishisayo bese usigcoba ngesoso yenhlanzi enopelepele.
9 Isobho le-tendon yenkomo nama-pickle
Ngokunambitheka okumuncu okumaphakathi, okumnandi, isobho elicebile, ithenda yenkomo ephekiwe, ethambile futhi ehlafunwayo, emnandi kakhulu futhi ekhangayo, isobho lethambo lenkomo elinokhukhamba isobho okumelwe uzame ngokushesha nje lapho uthola ithuba.
Ngezinsuku ezibandayo, isobho le-tendon yenkomo kanye ne-pickle kuhlale kuyisinqumo esihle emndenini wakho. Ungakwazi ukwengeza isobho ngelayisi elincane elimhlophe elishisayo bese ucwilisa isoso yenhlanzi enopelepele ebabayo, ayikho into efana nayo.
eziyishumi I-braised yenkomo yenkomo
Ithenda yenkomo eboshiwe enotshani benkomo kanye nopelepele
Ithenda yenkomo eboshiwe ene-lemongrass kanye ne-chili isitshulu esihle kakhulu okufanele uzame kanye ukuze uguqule ukunambitheka kokudla kwakho kwansuku zonke. Ipuleti le-tendon yenkomo ephekiwe lithambile, liyahlafuna, linongwe ukunambitha, linokunambitheka okucebile, elimnandi nge-lemongrass kanye ne-chili.
Ukunambitheka kuyisiphuzo, kunosawoti, kudliwa nje, hhayi ukuhlafuna kakhulu, kodwa kuthambile futhi kukhangayo, ukudla nelayisi elishisayo kufaneleka kakhulu!
Umsipha wenkomo we-braised namaqanda ezigwaca
Ezinsukwini lapho namanje ungazi ukuthi yini ongayipheka, i-tendon yenkomo eboshiwe enamaqanda ezigwaca iyisinqumo esihle komama bezindlu. Nge-tendon yenkomo ehlanjululwe kahle, efakwe ngokulinganayo ngezinongo, amaqanda e-quail athambile amnandi, anikezwe irayisi elishisayo, imifino eluhlaza iphelele.
Ake siye ekhishini siyobukisa ngalo msipha omnandi wenyama yenkomo namaqanda ezigwaca ukuze wonke umndeni ujabulele ngezimpelasonto!
11 Iphalishi le-tendon yenkomo
I-tendon yenkomo idume njengokudla okuqukethe umsoco ophakeme kakhulu. Iphalishi lethambo lenkomo liphekwe kahle linemisipha yenkomo ethambile, enoshukela nenamafutha ekhipha iphunga elimnandi elivela ku-anyanisi oluhlaza kanye ne-coriander.
Ukunambitheka kucebile, kuyathandeka, kufanelekile ukwengeza umsoco ezigulini. Qiniseka ukuthi uyabasiza ukuthi baguqule ukunambitheka kwabo, ubumnandi kanye nobumnandi, futhi ubuyisele umsoco ngokushesha.
Ngokushesha thenga zonke izinhlobo zamagrithi okhuni phansi ku 40%, Chofoza lapha ukuze ubone imininingwane.
Njengamanje, i-Dien May XANH inohlelo “BUKA IMPUMELELO IMPUMELELO” enokunikezwa okuningi okushaqisayo kwezinto zasekhishini, ezinamamodeli ahlukahlukene (Kusebenza kuye ngomkhiqizo):
Kufikela ku-50% isephulelo
Ukulethwa okusheshayo nokulula
Ngezitsha ezimnandi ezingu-25 ezivela kumthambo wenkomo eziphakanyiswe ngenhla, ngeke udinge ukuthi ube nekhanda elibuhlungu njalo uma uya ekhishini. Fisela wena nomndeni wakho isidlo sakusihlwa esimnandi esivela ezitsheni zenyama yenkomo lapha!
Ihlelwe nguNguyen Thanh Ngan • Ibuyekezwe 02/28/2022
Tổng hợp những lời chúc mừng thọ hay và ý nghĩa nhất năm 2022 | Muasalebang